FAA’IDADA CAFIMAAD EE MILIXDA
1.Waxay xoojisaa milixdu habka difaaca jidhka.
2.Cusbada baddu dabiiciyan waxay ka caawisaa qofka inuu si fiican u dhismo hab-dhiska difaaca ee jidhku. Sidaa darteed wuxuu qofku iska cabin karaa fayraska duriga keena iyo xumadda hargabka, elerjiga iyo xanuuno kale.
3.Hoos u dhaca miisaanka: Rumayso ama ha rumaysan, laakiin cusbada baddu sidoo kale waxay qofka ka caawisaa inuu hoos u dhigo miisaankiisa. Sidoo kale waxay qofka ka caawisaa in jidhkiisu si fiican u sameeyo dheefshiidka cuntada, taasoo sababaysa in cuntada marka la cuno ka dib ay si degdeg ah u dheef-shiidmayso, waxa kale oo ay ka hortagtaa in koritaanka xubnaha dheef-shiidka, kuwaasoo sababa haddii ay waynaadaan in culays ama miisaan uu jidhkaaga fuulo.
4.Maqaarka Jidhka:Ku maydhashada cusbada baddu waxay ka caawisaa jidhka oo ay ka hortagtaa inuu qalalo ama uu adkaado. Sidoo kale waxay furfurtaa daloolada jidhka.
5.Xiiqda: Cusbada baddu ama milixdu waxay aad hoos u dhigtaa khatarta ku timaada hab-dhiska neefsashada, kaasoo sababa haddii uu xumaado xanuunka loo yaqaan xiiqda.
6.Caafimaadka Wadnaha: Marka cusbada badda oo biyo lagu qasay la isticmaalo waxay hoos u dhigtaa heerka subaga dhiiga, dhiig karka, waxaanay si fiican uga shaqaysiisaa garaaca wadnaha, waxaanay ka hortagtaa wadne istaaga iyo faaliga.
Qalinkii Eng-Zeeteye Abdi Zeenyo